तपाइँको बिक्री प्रतिक सामाजिकमा किन छैन? | Martech Zone
तपाइँको बिक्री प्रतिक सामाजिकमा किन छैन?
सोमबार, अक्टोबर 29, 2012 सोमबार, अक्टोबर 29, 2012 Douglas Karr
भर्खरको सम्मेलन मा, हामीले हाम्रो एक ग्राहकलाई कुशलतापूर्वक नेटवर्कि and र भेट्टायौं कोठामा काम गर्दै। उनीहरूले उत्कृष्ट काम गरिरहेका थिए र सम्मेलनमा धेरै न्यानो सहभागीहरूको सूचीको बाबजुद केहि राम्रो नेतृत्व हासिल गरिरहेका थिए। जब मार्टी उनीहरुसँग कुरा गर्थे, उनले याद गरे कि उनीहरुसंग कुनै पनि सामाजिक जानकारी छैन उनीहरुसंग बिक्री को साथ अनलाइन सम्पर्क गर्न। फर्केपछि, उनले उनीहरूलाई बताउनको लागि व्यवसाय लेखे र उनीहरू इमानदार थिए र भने उनीहरूको बिक्री टोली वास्तवमै थिएन त्यो सामाजिक.
तिमी मसँग ठट्टा गर्दैछौ।
जबकि लिंक्डइन एक घरजग्गा जस्तो लाग्न सक्छ, फेसबुक कलेज बच्चाहरु र शब्द को लागी लाग्न सक्छ tweeting हास्यास्पद लाग्न सक्छ, यी तपाईले भेट्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सम्मेलनहरू हुन्। त्यहाँ छन् अरबौं सयौंको साथ अनलाइन व्यक्तिहरूको कुनै पनि दिन तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको खोजीमा, तपाईंको कम्पनीको बारेमा सोध्दै, र अनलाइन संलग्न हुन इच्छुक अझ बढी तिनीहरूले अफलाइन भन्दा।
लिंक्डइनमा इण्डस्ट्री ग्रुपहरू, फेसबुकमा इन्डस्ट्री पेज, ट्वीटअपहरू, लाइभ ट्वीटर सेसनहरू र ट्वीटरमा ह्यासट्यागहरूले तपाईंको बिक्री टोलीलाई नेटवर्क, विश्वसनीयता निर्माण गर्न र सम्भावित अनलाइन खोजी गर्न अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ। किन संसारमा तपाईं हजारौं डलर खर्च गर्नुहुन्छ बुथ बनाउन र तपाईंको बिक्री टोलीलाई एउटा कन्फरेन्समा पठाउन ... तर सोशल मिडियालाई वेवास्ता गर्नुहोस्? आजकल त्यो साधारण सादा पागल हो। पागल
यहाँ केहि सुझावहरू छन् तपाइँको बिक्री टीमहरू ट्विटरमा:
एक छ सामाजिक मिडिया नीति ठाउँ मा र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको बिक्री प्रतिनिधिहरु लाई थाहा छ के हो र कसलाई उनीहरु लाई अनलाइन बारे कुरा गर्न अनुमति दिईएको छैन।
पूर्ण रूपमा भर्नुहोस् तपाईंको प्रोफाइल र एक वास्तविक फोटो जोड्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको कम्पनी लाई केवल तपाइँको बिक्री प्रतिनिधि को लागी कस्टम लैंडिंग पृष्ठ को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ!
खोज उद्योग समूहहरू लिंक्डइनमा। धेरै सदस्यहरूको साथ समूहहरूमा सामेल हुनुहोस् जससँग धेरै गतिविधिहरू छन्। कुराकानीमा मान थप गर्नुहोस्।
बेच्नुहोस्! तपाईं एक सम्मेलनमा कसैको साथ हिंड्ने थिएन र तिनीहरूलाई १ day दिने परीक्षण प्रस्ताव गर्नुहुनेछ ... यो सोशल मिडियामा नगर्नुहोस्। व्यापार मूल्य बन्द गर्न तपाईंले मूल्य आपूर्ति गर्न र तपाईंको नेटवर्क अफलाईनको साथ सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्नेछ र यो कुनै फरक अनलाईन छैन।
विवाद त्याग्नुहोस्। धर्म, राजनीति, शंकास्पद हास्य - ती सबैले तपाईलाई अफिसमा समस्यामा पार्दछ र तपाईलाई अनलाइन समस्यामा पार्दछ। र अनलाइन स्थायी हो!
नगर्नुहोस् Badmouth प्रतिस्पर्धा। यो स्वादहीन छ र तपाईंको व्यापार खर्च हुनेछ। यसले उनीहरूलाई निराश पार्दछ किनभने उनीहरूका खुशी ग्राहकहरू र ग्राहकहरू उनीहरूको उद्धारमा आउँदछन् र तपाईंमा स्विings्गहरू लिन थाल्छन्।
प्रदान गर्नुहोस् समर्थन। व्यक्तिलाई तपाईंको ग्राहक सेवा पृष्ठमा फर्वार्ड गर्न पर्याप्त छैन। समस्याको ठीक तरिकाले ह्यान्डल भएको निश्चित गर्न व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिनु र ग्राहकलाई खुसी राख्नु नेटवर्कले तपाईंलाई ठूलो प्रभाव पार्छ र तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूको कत्ति ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा।
मात्र नगर्नुहोस् संग जडान गर्नुहोस् संभावनाहरु। तपाईंको प्रतिस्पर्धा अनुसरण गर्नुहोस् ताकि तपाईं उनीहरूको बारेमा, तिनीहरूको रणनीतिहरू र तिनीहरूको समुदायको बारेमा बढि जान्न सक्नुहुनेछ। उद्योग विचार नेताहरू अनुसरण गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको नेटवर्कमा परिचय गराउन मद्दत गर्दछ। तपाइँका ग्राहकहरूको अनुसरण गर्नुहोस् र उनीहरूको कामको प्रचार गर्नुहोस्। त्यसोभए उनीहरूलाई चिन्नको लागि सम्भाव्यताको अनुसरण गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको बिक्री रणनीति इनबाउन्ड लीडहरूको लागि पर्खनु छ, नेतृत्व सूचीमार्फत डायल गर्नुहोस्, र अर्को सम्मेलन व्यापार कार्ड स collect्कलनको लागि कुर्नुहोस्, तपाईं गम्भीर रूपमा सीमित गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईंको माग बेच्ने अवसरहरू छन्। तपाईंको उत्पादन र सेवाहरूको लागि मांग अहिले अनलाइन छन्। कुराकानीहरू तपाइँसँग वा बिना नै भइरहेको छ ... वा अझ खराब - तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूसँग। तपाईं ती कुराकानीहरूमा हुनुपर्दछ। तपाईंले ती बिक्रीहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
टैग: नेतृत्व पुस्तासुराकीबिक्री सक्षमतासामाजिक संजालसामाजिक संजाल
सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको राज्य